भजन २ 25 बाट प्रार्थना पोइन्ट्स प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना प्रार्थना भजन २ 25 बाट औंल्याउँछ
प्रार्थना भजन २ 25 बाट औंल्याउँछ
आज हामी भजन २ 25 को पुस्तक खोज्नेछौं। हामी भजन २ 25 का शक्तिशाली प्रार्थना बिन्दुहरूलाई हेर्नेछौं। यी अरू भजनहरू जस्तै यी भजनहरू इस्राएलका राजा राजा दाऊदले लेखेका थिए र पृथ्वीमा अहिलेसम्म बाँचेका सबैभन्दा महान राजा। भजन २ 25 मा हामीलाई देखाउन सर्वशक्तिमान परमेश्वरसंग बिन्तीको गीत हो दया र अनुकम्पा जहाँ हामीलाई यसको सबैभन्दा बढी आवश्यक छ।
साथै, भजन २ 25 ले हामीलाई मानिसहरूका अपमानबाट बचाउन परमेश्वरलाई बिन्ती गरिरहेको छ। हामी बाँचिरहेको यस वर्तमान संसारमा धेरै मानिसहरू धैर्यतासाथ हाम्रो पतनको लागि पर्खिरहेका छन् विशेष गरी ईसाईको रूपमा ताकि तिनीहरूले हाम्रो गिल्ला गर्न सकून् र हामीले परमेश्वरको सेवा गरिरहेका परमेश्वरलाई बदनाम गर्न सकून्। राजा दाऊदले हामीमध्ये धेरैजसोलाई मन पराउँछन् कि उनीहरूले लाज मान्नुपर्दछ भनेर भजनसंग्रह २ 25 ले उहाँलाई आफ्ना शत्रुहरूको योजनाबाट बचाउन बिन्ती गरेको छ। यसैले हामी पनि रातदिन परमेश्वरको नाम पुकार्छौं र हामी जसले हाम्रो विश्वासको सम्झौता गर्न इन्कार गरेका छन, भजन २ 25 दिन र रात हाम्रो गान हुनुपर्दछ र उहाँमा विश्वास गर्नेहरू सम्बन्धी आफ्ना प्रतिज्ञाहरूलाई सधैं सम्झना गराउन दिन रात सम्झनु पर्छ।
भजन २ 25 प्रायः हामीलाई बचाउन परमेश्वरसँग बिन्तीको बारेमा रहेको तथ्यलाई स्थापित गरे निन्दा वा लाज, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नको लागि यस अद्भुत शास्त्रहरूको प्रत्येक विश्लेषण गर्छौं।
भजन १२25 अर्थ पद पद द्वारा
पद १ र २, हे प्रभु, म आफ्नो प्राणलाई उठाउँछु। हे मेरो परमेश्वर, म तपाईंमाथि भरोसा गर्छु। मलाई लज्जित नपार्नुहोस्। मेरा शत्रुहरू ममाथि हाँस्ने छैनन्
भजन २ 25 को पहिलो र दोस्रो पदले परमेश्वरमा हाम्रो जीवनको पूर्ण समर्पणको बारेमा कुरा गर्दैछ, हाम्रा सबै चिन्ताहरू उहाँमाथि हाम्रो विश्वासको लेखक र अन्त्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ। पहिलो दुई पदहरू पनि हाम्रो बिन्तीलाई परमेश्वरले निराश गर्नुहुन्न भनेर बिन्ती गर्दैछ। याद गर्नुहोस् कि धर्मशास्त्रले भन्छ धर्मीजनका आशाहरू छोटा हुँदैनन्। फेरि ती पदहरूले दुश्मनलाई हराउन खोज्छन्।
पद & र Indeed वास्तवमा तपाईंको प्रतीक्षा गर्ने कोही पनि लाज नमानोस्। ती मानिसहरूलाई लज्जित तुल्याऊ जसले बिनाकारण विश्वासघात व्यवहार गर्दछ। हे परमप्रभु, मलाई तपाईंको पथ निर्देशन गर्नुहोस्। मलाई तपाईंको मार्गहरू सिकाउनुहोस्।
भजन २ 25 को पद three र ले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई बिन्ती गर्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। यी पदहरूमा, राजा दाऊदले परमेश्वरलाई बिन्ती गरिरहेका थिए कि उनको लाज नमान्नुहोस् र विश्वासघाती व्यवहार गर्नेहरूलाई लज्जित तुल्याउन परमेश्वरलाई बिन्ती गर्नुभयो। यी पदहरूमा पनि हामी परमेश्वरको मार्ग जान्न बिन्ती गर्न सक्छौं।
पद & र। मलाई तपाईंको सत्यतामा डो Lead्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईं मेरो उद्धारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईं मा, म दिनभर पर्खन्छु। हे प्रभु, तपाईंको कोमल कृपा याद गर्नुहोस् र तपाईंको करुणालाई सम्झनुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालका छन्।
भजन २ 25 को पद and र मा एक व्यक्तिले उसले गरेका सबै कुरामा परमेश्वरको सल्लाह खोजिरहेको देखायो। पदले पाँच दिनसम्म मलाई तपाईंको सत्यतामा डोर्‍याउँछ र मलाई सिकाउँछ; यसले वर्णन गर्दछ कि मानवको रूपमा हामी आफैंबाट केही पनि जान्दैनौं, बाहेक ईश्वरले सिकाउने र हामीलाई जाने बाटो देखाउनु बाहेक हामी अन्धकारमा हिंडिरहेका हुन सक्छौं।
पद & र my मेरो युवावस्थाका पाप र मेरो अपराधहरू सम्झना नगर्नुहोस्; हे परमप्रभु, तपाईंको महान प्रेमको कारण मलाई सम्झना गर्नुहोस्।
यस भजनको पद and र ले खास गरी युवावस्थामा गरेका पापहरूको लागि क्षमाको लागि परमेश्वरलाई गुहार्दै छ। हाम्रो युवावस्थाका दिनहरू यसै बीचमा हामी एक्लो भएर बस्दैनौं, यसको अर्थ हाम्रो डरलाग्दो पुरानो दिन पनि हुन सक्दछ जब हामीले ख्रीष्टलाई प्रभु र उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्‍यौं। हामी मध्ये धेरैले भय terrible्कर कार्यहरू गर्यौं जुन हामी यस संसारमा थियौं। त्यसकारण यस पदले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको कृपाको लागि बिन्ती गरिरहेको छ र हामीले गरेका सबै नराम्रा घटनाहरूमा उहाँसँग क्षमा माग्दै छ।
पद & & Good असल र सोझो प्रभु हुनुहुन्छ; त्यसकारण उहाँ पापीहरूलाई बाटोमा सिकाउनुहुन्छ। नम्र मानिसहरूले न्यायको निम्ति डो justice्याउँदछन्, र नम्रहरूले उहाँको तरिका सिकाउँछन्।
यी दुई पदहरूले परमेश्वर आफ्ना कामहरूमा धर्मी र धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दछ। परमेश्वर बुझ्नुहुन्छ कि पापी बच्चाको बच्चा जस्तो हो जसलाई केहि पनि थाहा छैन, त्यसैले परमेश्वर आफैले पापीलाई धार्मिकताको अंश सिकाउनुहुन्छ। मानिसको स्वभाविक अवस्था दुष्टताको चरित्र हो, तर परमेश्वरको आत्माले पापीलाई परमेश्वरको मार्ग सिकाउन मद्दत गर्दछ।
पद १० र ११ परमप्रभुका सबै मार्गहरू दया र सत्यता हुन्, जसले उहाँको करार र उहाँका साक्षी पालन गर्दछ। हे प्रभु, तपाईंको नाउँको खातिर, मेरो अधर्म क्षमा गर्नुहोस्, किनकि यो महान् छ।
परमेश्वर सर्वोच्च हुनुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै आफ्नो शब्दहरूमा पश्चात्ताप गर्नुहुन्न। यी दुई पदहरूले परमेश्वरको मार्ग कृपा र सत्य हो भन्ने तथ्यलाई बुझेका थिए र परमेश्वर सधैं आफ्नो करार राख्नुहुन्छ। सारमा भन्नुपर्दा, यदि भगवानले कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने, त्यो अवश्य पूरा गर्नुहुनेछ। यस पदको पछिल्लो भागले अझै पनि परमेश्वरले दिनुभएका प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनबाट बाधा पुग्न सक्ने सबै अधर्महरूको क्षमाको लागि परमेश्वरलाई बिन्ती गर्दछ।
पद १२ र १ 12 प्रभुलाई डराउने मानिस को हो? उसले आफूले चाहेको तरिकामा सिकाउनु पर्छ। उहाँले समृद्धिको बास गर्नेछन्, अनि तिनका सन्तानहरूलाई पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन् पर्छ।
याद गर्नुहोस् शास्त्रपदले भन्छ कि प्रभुको डर भनेको बुद्धिको शुरुवात हो। यस पदले जोड दियो कि एक व्यक्ति जो प्रभुसँग डराउँछ, भगवान उसलाई उसको मार्ग सिकाउनुहुनेछ। यो मान्छे आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको इच्छाबाट टाढा जान सक्दैन। यस किसिमको व्यक्तिले जहिले पनि गाह्रो लागे पनि उद्देश्यको पूर्ति गर्दछ किनकि भगवानले आफ्नो पाइलाहरू जाने बाटोमा डोर्याउनुहुनेछ।
पद १ & र १ the परमप्रभुको रहस्य उहाँसँग डराउनेहरूसँग छ, र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार देखाउनुहुनेछ। मेरो आँखा उहाँले नेट बाहिर मेरो खुट्टा बांधन पर्नेछ, प्रभु तिर कहिल्यै छन्।
Of fears of।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। Of। Of। Of। Of। That।। Of of। Of of of that। Of of of that। Of। Of of of that।। Of परमप्रभुको रहस्य तिनीहरूकै साथ छ जो परमप्रभुको डर मान्दछन्। यसको शाब्दिक अर्थ हो कि डीले कुनै मानिसबाट केहि पनि लुकाउँदैन जो डराउँछ र उहाँको आज्ञा पालन गर्दछ। यसको व्यावहारिक उदाहरण बुबा अब्राहम हो, अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञापालन गरे किनकि उनी परमेश्वरसँग डराउँथे। र बाइबलले रेकर्ड गरेको छ कि परमेश्वरले मेरो साथी अब्राहमलाई बताएको बिना म केहि गर्ने छैन भनेर भनेको थियो। केहि पनि थाहा छैन यस्तो व्यक्तिलाई अनजानमा; केहि यस्तो आश्चर्य व्यक्ति द्वारा लिनेछ। यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले अक्षरश: गहिरो चीजहरू र अधिक रहस्यहरू प्रकट गर्नुहुनेछ।
पद १ & र १ You मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि म उजाड र पीडित छु। मेरो मुटुका समस्याहरू बढेका छन्। मलाई मेरो कष्टबाट बाहिर निकाल्नुहोस्!
पद १ 16 र १ ले कष्टको लागि दयाको निम्ति परमेश्वरलाई बिन्ती गरिरहेका छन्। यसले मलाई आफुतिर फर्काउँछ र ममाथि दया गर्नुहोस् भन्छ। जो परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ पक्कै दया पाउनुहुन्छ।
पद १ & र १ my मेरो कष्ट र पीडालाई हेर्नुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहोस्। मेरा शत्रुहरूलाई विचार गर्नुहोस्, किनकि तिनीहरू धेरै छन्, र तिनीहरूले मलाई क्रूर घृणा गर्छन्।
जब तपाईं पुग्न कहिँ छैन, प्रार्थनामा परमेश्वर फर्कनको लागि यो उत्तम समय हो। भजनसंग्रहका यी पदहरूले उहाँलाई बिन्ती गर्दछन् र उसको सबै पीडा देख्‍न, उनका पापहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् र बचाउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, धेरै वर्षसम्म इस्राएलका सन्तानहरू मिश्रमा नै थिए जबसम्म तिनीहरूले सहायताको लागि परमेश्वरलाई पुकारेका थिएनन्।
पद २० र २१ मेरो प्राण बचाउनुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्; मलाई निराश नपार्नुहोस् किनभने म तपाईंमा भरोसा राख्छु। मेरो ईमान्दारिता र ईमान्दारी हुन मलाई बचाउनुहोस्, किनकि म तपाईंको प्रतीक्षा गर्छु।
भजन २ 25 को यो पछिल्लो पदले आफ्नो प्राण बचाउनको लागि परमेश्वरलाई बिन्ती गरिरहेको छ। यस पदले यस तथ्यलाई दोहोर्‍याइरहेको छ कि उनले प्रभुमा भरोसा राखेका थिए र उनी लाजमा पर्नुहुन्न।
हे पद, हे इस्राएल, तिनीहरूको सबै समस्याहरूबाट उद्धार गर्नुहोस्।
इस्राएललाई आफ्नो पुरानो महिमाको लागि छुटकाराको लागि बिन्ती गरेर दाऊदले भजनको अन्त्य गरे।
तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई कहिले यो भजनको आवश्यकता छ, तपाईं तल केही अवस्थाहरूको लागि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईंले भजन २ 25 प्रयोग गर्नुपर्नेछ
जब तपाईं भविष्यको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ
जब तपाईं डराउनुहुन्छ कि तपाईं लाजमा पर्नुहुनेछ
जब तपाईं केहि चीजहरूको बारेमा परमेश्वरबाट प्रकाश चाहनुहुन्छ
जब तपाईंलाई दया चाहिन्छ
जब तपाई छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्न चाहानुहुन्छ
भजन २ 25 प्रार्थना पोइन्टहरू
हे प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको दयाले मलाई येशूको नाममा जीवनमा कुन बाटो देखाउने भनेर सिकाउनुहोस्।
प्रभु, तपाईंको वचन भन्छन् प्रभुको रहस्य उहाँसँग डराउनेहरूको साथमा छ, म तपाईंलाई येशूका नाममा गोप्य कुरा बताउन थाल्छु भनेर अनुरोध गर्दछु।
म मेरो पाप र अधर्मको क्षमाको लागि प्रार्थना गर्दछु, प्रभुले मलाई येशूको नाममा क्षमा गर्नुहोस्।
धर्मी बुबा, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु कि तपाईंले मलाई बचाउनुहुनेछ र येशूको नाममा मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्।
हे दयालु परमेश्वर! आज ममाथि कृपा गर्नुहोस् र तपाईंको दयाले मलाई येशूको नाममा मेरो मृत्यु खोज्नेहरूबाट मलाई लुकाउन दिनुहोस्।
हे प्रभु, तपाईंको कृपाले गर्दा येशूको नाममा मेरो जीवनलाई नष्ट गर्नका लागि मेरा विरुद्ध बोल्ने हरेक शैतानी आवाज मौन गर्नुहोस्।
हे भगवान! मेरो वरिपरि सबै कुरा प्रयोग गर्नुहोस् मलाई येशूको नाममा आमिन गर्न आमेन।
हे भगवान! बच्चाले आमा बुबाको अनुहार खोज्दा म तपाईंको अनुहार खोजी गर्दछु। मलाई येशूको नाममा मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा तपाईंको पक्षमा देखाउनुहोस्।
हे प्रभु, आज म मेरो संकष्टमा तपाईंलाई आह्वान गर्दछु। मलाई सुन्नुहोस् र येशूको नाममा ममाथि दया गर्नुहोस्।
हे प्रभु, तपाईले मेरो प्रार्थनालाई उत्तर दिनुहुँदा मेरो हृदय आनन्दले भरोस्।
हे प्रभु, म तपाईको भलाइ र दया येशूबाट कहिल्यै मबाट हट्ने छैन भनेर घोषणा गर्दछु।
हे भगवान, मेरो जीवनको यस मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नुहोस् (मुद्दाको उल्लेख गर्नुहोस्) मेरो दुश्मनहरूका अघि म हाँसोको पात्र बन्न अघि। मेरा दुश्मनहरूले येशूको नाममा मेरो निराशाको संकेतहरू देख्नुभन्दा अघि ममाथि दया गर्नुहोस्।
हे भगवान, मलाई यो घडीमा सहयोग चाहिन्छ। यो नाम मा येशूको नाम मा ढिलो हुनु अघि मलाई मद्दत गर्नुहोस्।
हे प्रभु, तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ जो गरीबहरूलाई माटोबाट उठाउनुहुन्छ, गोबरको दरिद्र खाँचोमा परेको, मलाई कृपा देखाउनुहोस् र येशूको नाममा यस परिस्थितिमा हस्तक्षेप गर्नुहोस्।
हे प्रभु, जब म तपाईको सेवा गर्दछु निरन्तर तपाईको दयाले सधैं मेरो जीवनमा न्याय गरीदिनु पर्छ।
हे भगवान, कृपाका परमेश्वर, उठ्नुहोस् र मलाई येशूको नाममा दुश्मनको हरेक झूटो आरोपहरूबाट जोगाउनुहोस्।
हे प्रभु, मेरो जीवनका चुनौतिहरू अति भारी छन्, तिनीहरू मलाई मेरो कृपा देखाउन र येशूको नाममा मलाई मद्दत गर्न यत्तिको शक्तिशाली छन्।
हे प्रभु, आज ममाथि दया गर्नुहोस्। मेरा शत्रुहरूले मलाई येशूको नामको खाडल भित्र भित्र नपारोस्।
येशू ख्रीष्ट, दाऊदका छोरा, ममाथि कृपा गर्नुहोस् र येशूको नाममा मेरो जीवनका युद्धहरू लड्नुहोस्।
हे प्रभु, ममाथि कृपा गर्नुहोस् र येशूको नाममा मेरो जीवनको यस अवधिमा मेरो लागि सहयोगीहरू खडा गर्नुहोस्।
अर्को लेखमाभजन The२ पद पद द्वारा पद
भजन २ 24 लाई पदको अर्थ छ
दु: खको बिरूद्ध प्रार्थना पोइन्ट्स